दुबईको सडकमा कपिल शर्मालाई 'थप्पड' !
दुबईको सडकमा कपिल शर्मालाई ‘थप्पड’ !
२ हप्ता अगाडि • १३२ पटक पढिएको
मुम्बई । कमेडियन कपिल शर्मा सधैं चर्चाको शिखरमा हुन्छन्। ‘द कपिल शर्मा’ शोमार्फत् जसरी उनले सेलिब्रेटीहरुको मजाक उडाउँछन्। रियल जीन्दगीमा फ्यानहरुले कपिलको पनि मजाक उडाइरहेका हुन्छन्। चाहे त्यो ट्वीटरमा गरिने बहसका कारण होस् या सन्तान जन्माउने कुरालाई लिएर नै किन नहोस्।
आइतबार पोस्ट् गरिएको एउटा भिडियो कारण पनि उनी चर्चामा छन्। दुबईमा बनाइएको उक्त भिडियोमा कपिललाई उनकै कोस्टारले ‘थप्पड’ लगाउँछिन्। घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै परस्त्रीसँग लाग्दा यस्तै परिणाम आउनसक्ने उनको भिडियोले सन्देश दिन्छ।